HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Tzotzil Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: TE HANANA FIAINANA MAHAFA-PO VE IANAO?
“Fitopolo taona no androm-piainanay, ary raha tena matanjaka izahay, ka mahatratra valopolo taona, dia indrisy fa feno zava-tsarotra sy fijaliana izany!” —Salamo 90:10.
FENO “zava-tsarotra sy fijaliana” ny fiainana, ka mety hieritreritra ianao hoe: ‘Mety hisy dikany ihany ve ny fiainana?’
Eritrereto i Maria, 84 taona. Navitribitrika foana izy, nefa tsy afaka mandeha irery intsony izy izao rehefa hivoaka ny trano. Mbola te hanao zavatra be dia be izy fa tsy maharaka intsony ny vatany. Ara-dalàna àry raha mieritreritra izy hoe tsy misy dikany ny fiainany.
Ianao koa angamba indraindray mahatsapa hoe tsy misy dikany firy ny fiainanao. Mety ho tsy miova mihitsy, ohatra, ny asanao any am-piasana ka mandreraka sy mankaleo be anao. Tsy misy mahamarika akory aza angamba hoe miasa mafy ianao. Na efa metimety aza anefa izao ny fiainanao, dia mety hanahy ihany ianao hoe hanao ahoana ny hoavinao. Mahatsiaro ho irery na kivy be koa angamba ianao indraindray, na miady lava ianareo ao an-trano. Nisy olona akaiky anao nindaosin’ny fahafatesana koa angamba. Hoatr’izany no nahazo an’i André. Mpinamana be izy sy ny dadany, nefa narary tampoka ilay dadany ka maty. Tena mafy tamin’i André izany satria lasa nisy banga ny fiainany. Nieritreritra izy fa tsy ho zakany mihitsy izany.
Mety hisy dikany ihany àry ve ny fiainana? Na inona na inona manjo anao, dia tena mila fantarinao ny valin’izany. Andeha isika handinika ny fiainan’i Jesosy Kristy tamin’izy tetỳ an-tany, 2 000 taona lasa teo ho eo izay. Niatrika zava-tsarotra be dia be izy, nefa tsy nahatsiaro mihitsy hoe tsy nisy dikany ny fiainany. Tsy hahatsapa an’izany koa isika raha manahaka azy.
Hizara Hizara Mety Hisy Dikany Ihany ve ny Fiainana?